Madaxeyne Farmaajo " Waxaan halkaan u imid in taageero iyo garab istaag aan weydiisto walaalaheena Itoobiya, una midoowna dagaalkan ka dhanka ah Al-Shabaab".
Monday October 23, 2017 - 20:14:58 in Wararka by Super Admin
Hoggaamiyaha dowladda Federaalka Soomaaliya Max'med Cabdullaahi Farmaajo oo Booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa ee Wadanka Itoobiya wuxuuna socdaalkan qeyb ka yahay Olole kaalma weydiisasho ah.
Farmaajo waxaa garoonka diyaaradaha Addis Ababa kusoo dhoweeyay wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Workneh Gebeyeho iyo wasiirka Gaashaandhigga, hoggaamiyaha dowladda Federaalka ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtay Addis sheegay in socdaalkiisu uu yahay sidii uu kaalmo melleteri oo ka dhan ah Xarakada Al Shabaab uweydiisan lahaa Itoobiya.
Wuxuu sheegay in dowladdiisu ay codsi walaalnimo uu ku tilmaamay ay hor dhigtay Itoobiya kaasi oo ah in melleteriga Itoobiya olole melleteri oo hor leh ku qaadaan gobollo katirsan dalka Soomaaliya oo sharciga islaamka lagu maamulo.
" Waxan halkan u imid in taageero iyo garab istaag aan weydiisato walaalaheena Itoobiya, una midowna dagaalkan ka dhanka ah Al-Shabaab" sidaas waxaa yiri Farmaajo.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ayaa lafilayaa in uu kulan laqaato R/wasaaraha Itoobiya isagoo ka dhaadhicin doona in ciidamada Itoobiya ay Villa Somalia uqabtaan magaalooyin hor leh oo Soomaali leedahay.
Farmaajo ayaa qaaday dhabihii Cabdullaahi Yuusuf,Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo dhammaantood kaba qaad u ahaa dowladda gumeysiga Itoobiya ee duullaanka kusoo qaadday dalka Soomaaliya.
Video+Sawirro: Wadamada ay kasoo Jeedaan Dadkii Ku Dhintay Diyaaraddii Ku Burburtay Dalka Itoobiya.